कसको मृत्यु भयो जस्लाई प्रचण्ड आफै पार्टीको झन्डा ओडाउंन आफै पुगे ? – Namaste Host
January 26, 2021 January 26, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कसको मृत्यु भयो जस्लाई प्रचण्ड आफै पार्टीको झन्डा ओडाउंन आफै पुगे ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल –नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अझै शक्तिका साथ लड्ने बताउनुभएको छ ।
पुराना वामपन्थी नेता खम्बासिंह कुँवरलाई आज यहाँ श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घातक प्रवृत्तिविरुद्ध अझ शक्तिका साथ ल’ड्ने प्रेरणा कुँवरबाट प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले नेपालका कम्युनिष्ट र राजनीतिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक मोड आएको जनाउँदै उहाँले गम्भीर ध’क्का जस्तो लागेका बेलामा कुँवरको निधनमा भएको शोकलाई शक्तिलाई बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
दाहालले विसं २०३३ मा गोरखाको आरुघाटमा आफू शिक्षक भएका बेला कुँवरसँग चौथो महाधिवेशन (चौम) पार्टीको सदस्यता लिएको लिनुभएको थियो ।
सदस्यता लिएपछि निरन्तर आफूलाई अघि बढाउनमा उहाँको ठूलो योगदान रहेको जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो “कम्युनिष्ट आन्दोलनका अभिभावकका रुपमा र आफ्नै अभिभावकका रुपमा मेरो जीवनमा उहाँको योगदानका कारणले म अहिले योे ठाउँमा आइपुगेको हुँ ।”
यसअघि अध्यक्ष दाहाल र माधवकुमार नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको शोक वक्तव्य वाचन गरिएको थियो ।
अध्यक्ष दाहाल कुँवरको पार्थिव शरीरमा माल्यार्पणपछि भरतपुरबाट शव बोकेर देवघाटतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष दाहाल गृह जिल्ला आउँदा सधैंँजसो कुँवरलाई भेट्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
कुँवरको आजै देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिंँदै छ । विसं १९८४ वैशाख १० गते लमजुङको तत्कालीन थानसिंह बाङ्ग्रे गाविस वडा नम्बर ७ मा जन्मिनुभएका कुँवरको आज बिहान भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
उहाँ हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १० मा बस्दै आउनुभएको थियो । (तस्वीर उपलब्ध छ ।)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सदस्य खम्बासिंह कुँबर (काजी बा) को निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आज संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै नेपाली जनताको मुक्ति र सबै खाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध लड्ने काजी बाको असामयिक निधनको खबरले मर्माहत भएको जनाउनुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “उहाँको निधनले हाम्रो पार्टी र सिङ्गो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले एक अथक योद्धा तथा अभिभावक गुमाएको छ ।
हाम्रो पार्टी कमरेड कुँवरप्रति क्रान्तिकारी अभिवादनसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवार जन तथा आफन्त जनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।”
काजी बाको ९४ वर्षको उमेरमा आज बिहान भरतपुरमा निधन भएको थियो । कुँवर विसं १९८४ वैशाख १० गते लमजुङको बाङ्गे–७ मा जन्मिएर चितवन गीतानगर, केशरवागमा बसोबास गर्दै आउनुभएको थियो ।
उहाँको जन्म बुबा ललितजङ्ग र आमा पुतलीका कान्छा छोराको रुपमा भएको थियो । उहाँका दुई छोरा र चार छोरी हुनुहुन्छ ।
कुँवर भारतीय सेनाको सेवा सुविधालाई छोडेर देश र जनताका निम्ति क्रान्तिमा होमिनुभएको थियो । उहाँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता २०११ सालमा लिनुभएको थियो ।
त्यसपछि उहाँ पार्टीका विभिन्न कमिटीमा क्रियाशील रहँदै विसं २०३१ सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । विसं २०४३ को अन्त्यतिर उहाँ गण्डक ब्यूरोबाट सरुवा भई नारायणी ब्यूरोमा जानुभएको थियो ।
उहाँ जीवनपर्यन्त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । कुँवरले नेपाली सर्वहारा वर्ग, मजदूर, किसान, उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको लागि वर्ग सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने अभियानमा महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको थियो ।
अध्यक्षद्वयले नेपाली वर्गीय आन्दोलनमा काजी बाको योगदान नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीका निम्ति सधैँ प्रेरणादायी र अनुकरणीय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उनको श्रीमती तपाई हो र ? यिनलाई भेट्न अर्की युवती आउने गरेकी छन् ति को हुन् ? (भिडियो)-
June 2, 2021 Bijay Lama